Madaxweyne Xasan shiekh oo la kulmay madaxweynaha dalka Kenya | Mareergur.com	Thursday, May 23rd, 2013	Home
Madaxweyne Xasan shiekh oo la kulmay madaxweynaha dalka Kenya
Oct 9, 2012 - Comments off	Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo socdaal ku jooga dalka Uganda ayaa magaalada Kampala kula kulmay maanta dhigiisa dalka Kenya Mwai Kibaki oo ay ka wada qeybgalayaan sanadguuradii 50aad ee kasoo wareegatay markii ay Uganda xornimada qaadatay.
Kulanka maanta ku dhexmaray magaalada Kampala labada Madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa Madaxweyneyaasha ku wehliyey saraakiil dhanka ciidammada ah ayadoo intii uu socday qodobadii looga hadlay shirkaasina ay ugu weyneyd howlgallada ay Ciidammada Kenya oo qeyb ka ah Ciidammada AMISOM ka wadaan gobollada Koonfurta Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horeyn uga mahad celiyey Madaxweynaha Dalka Kenya doorka ay Ciidammadiisu ku leeyihiin howlgallada dalka looga xoreynayo Maleeshiyada kooxda Al-Qaeda taasi oo uu Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku tilmaamay mid aysan dadka iyo Dowladda Soomaaliyeed iloobi doonin.
Gebagebadii kulanka ayey labada Madaxweyne isku afgarteen in lasii xoojiyo xiriirka soo jireenka ah ee ku dhisan daris wanaaga iyo in sidoo kale lasii laba jibaaro sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah argigixisada gobolka.
Dhinaca kale Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta khudbad ka jeedin doono munaasabad lagu maamuusayo sanad guuradii 50aad ee kasoo wareegatay markii uu dalka Uganda xornimada qaadatay